Sintomy Curtiss Hawk III 68 & BF2C-1 FSX
Ho an'ny version FS2004 kitiho eto
Curtiss Hawk III (modely BF2C-1 ary modely 68) ho FSX. Ny modely 5 sy ny endri-tsoratra 9 miaraka amin'ny feo mahazatra tsara tarehy ary miasa cockpit virtoaly (VC). Curtiss Hawk dia anarana iray mahazatra amin'ny fiaramanidina maro namboarina ary naorin'ny Curtiss Motor Company, mpiady ny ankamaroany.
Ho an'ny mody compatible FS2004 click eto
Curtiss Hawk III (modely BF2C-1 ary modely 68) ho FSX
Modely amin'ny 5 sy 9 amin'ny tononkira mahafinaritra sy ny fanaovana kapoka virtoaly (VC). Curtiss Hawk dia anarana iraisan'ny fiaramanidina maro natsangana sy natsangan'ny Curtiss Motor Company, ny ankamaroan'izy ireo dia mpiady.